Xisbiga M oo adkeeyneya siyaasadiisa ku wejehan socdaalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Johan Forssell (M), af-hayeenka siyaasadda socdaalka ee xisbiga Moderaterna oo ka qayb qaatay dood ka dhacday baarlamaka oo la xiriirtay siyaasadda socdaalka Sweden. sawir: Claudio Bresciani/TT
Xisbiga M oo adkeeyneya siyaasadiisa ku wejehan socdaalka
La daabacay fredag 13 oktober 2017 kl 12.53
Xubnaha xisbiga Moderaterna uga qeyb geleya kulanka uga socda magaalada Örebro ayaa la fileyaa iney taageero ku siiyaan hoggaanka xisbiga adkeeynta siyaasadda socdaalka ee xisbiga.
Xisbiga gudihiisa ayuu sidoo kale waxaa ka jira culays lagu saareyo sidii loo sii adkeeyn lahaa siyaasadda socdaalka.
Go’aammada la fileyo in shirka lagu guddoonsado ayey ka mid yihiin: In xeerka qaxootiga maanta lagu bedelo saamiga laga soo qaato xeryaha qaxootiga ee ka bax-san EU, in la adkeeyo midowga qaraabada, suurtagal in laga dhigo sidoo kale in dadka magan-gelyada dalbaneya xuduudda laga celin karo.
Kolkii laga doodayey fikirradii guddiga uu shir-hoowleedku u saarey siyaasadda socdaalka oo laga doodi doono maalinta axadda ayaa la maqlayey fikirrada in la sii adkeeyo siyaasadda socdaalka.
-Waxaa ugu wacan maadaama ay illaa maanta jiraan dhibaatooyin ka aloosan xaaladaha siyaasadda socdaalka iyo is dhex-galka fog ee xisbiga, sida uu sheegay af-hayeenka xisbiga ee siyaasadda socdaalka Johan Forssell.
Tallaabooyin hor leh
Forsell ayaa qiimeeynaya iney xubnaha kulanku qaadan karaan go’aammo ka sii adag ee su’aalaha qaarkood.
-Hase yeeshee aanan aheyn kuwo saameeyn ku leh jiheeynta mustaqbalka, sida uu sheegay Forssell.
Guddiga howshan loo xilsaarey ayaa ka dooday fikirka tirada qaxooti ee dalkani uu sannadkii qaabili kari lahaa, middaasina oo aan taageero ku yeelan guddiga dhexdiisa.
Hoggaanka xisbiga ayay taladdiisu tahay sidii loo hal beeg-san lahaa inuu dalka Sweden iyo ururka Midowga Yurub EU ey siyaasadda socdaalka ee maanta ku bedelaan midda saamiga ee dibadda laga soo qaato. Middaasi oo u sahlaysa sidii saqaf loogu dhigi lahaa tirada dadyoowga uu dal waliba oo ka mid ah EU saamiga u qaadan karo. Waxay middaasina ka macne ahaan lahayd in qaxootiga laga soo qaato waddammada ka bax-san EU.
Sharci-darrada dalka lagu joogo
Forssell wuxuu farta ku fiiqay inuu dalka Sweden isku celcelin uu tobankii sannadood ee ugu dambeeyey qaabili jirey qiyaastii 28 000 oo ruux.
-Waa tiradaa qiyaastii midda loo baahan yahay mustaqbalka, sida uu sheegay.
-Waa inay noqoto tiro ka hooseeysa tirooyinkii la qaabiley sannadihii ugu dambeeyey.
Sannadkii 2015 wuxuu dalka Sweden qaabilay qaxooti gaarsii-san 163 000, halka sannadkii 2014 la qaabiley tiro gaarsii-san 81 000.
Siyaasadda cusub ee socdaalka ee xisbiga Moderaterna waxay sidoo kale ka dhigan tahay in gacan adag lagu qabto sidii dalka looga saari lahaa dadyoowga dalabkoodii magan-gelyo doon diiddamada ku heley. Iyada oo loo mareyo tusaale ahaan in kuwa loo maleeyneyo iney dhuumaaleeysi geli doonaan lagu hayo goobaha xiran ee hayadda socdaalka.
Guddiga arrimmaha socdaalka ee shir-howleedku
Isku raacay iney maamullada degmooyinku u fidiyaan qaxootiga dhuumaaleeysaneya taageerada ugu yar ee lagama maarmaanka ah. Hoggaanka xisbiguna aamin-san yahay in middaasi tahay adkeeyn, halka ay horay ka ahayd taageero muddo gaaban socota.
Wuxuu sidoo kale guddi howleedku soo jeediyay in qof diidmo ku heley dalabkiisii magan-gelyo doon aannu dib u dalban karin muddo 10 sannadood ah kadib kolka uu dalka ka baxay.
Shuruudda muwaadin-nimada lagu qaato oo la adkeeyo
Afhayeenka siyaasadda socdaalka ee xisbiga moderaterna Johan Forsell ayaa sheegay inuu hoggaanka xisbigu taageero ballaaran ku heley fikirka in shuruudda luuqadda iyo aqoonta hab-nololeedka bulshada lagu daro dalabka muwaadin-nimo ee dalka. Waxaan sidoo kale aanay dood badani ka dhalan in dib loola noqon karo dhalashada asbaabo qaas ah. Su’aashan ayaa ahayd mid ay dood badani ka aloosnayd kulankii midkan ka horreeyay ee sannadkii 2009.
Gudiga socdaalka ee shir-howleedka ayey xubno ka yihiin qaar iyagu diidey go’aankii hoggaanka xisbiga ee oranayey in si ka dhakhso badan loogu noqon karo muwaadin cidda heesha shaqo iskuna fillaata. Sidaasi oo ay tahay ayey xubnaha guddigu aqlabiyad ku qaateen fikirka waxa lagu magacaabo – integrationsbonusen (abaal-marinta is dhex-galka).